राज्यको कहिले जाला ध्यान सिमानामा रहेका जिर्ण पिलरमाथि
नेपालगन्ज भदौ ३० गते नेपालगन्ज, बर्दियाको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा रहेको जमुनी र कालिका गाबिससंग जोडिएको नेपाल भारतीय सिमा छुट्टाउने सिमा स्तम्बहरु जिर्ण अबस्थामा पुगिसक्दा समेत मर्मतको लागि कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।
बर्दियाको जमुनी र कालिका गाबिस संग सिमा जोडिएको क्षेत्रमा कति ओटा सिमा स्तम्ब छन भन्ने बारेमा आजका दिनसम्म कसैसंग एकिन तथ्यांक छैन ।
सिमा सुरक्षाका लागि खटिएको ससस्त्र प्रहरी बल सिमा सुरक्षा पोष्ट जमुनी बर्दियाका अनुसार जमुनी र कालिका गाबिसमा ४० ओटा सिमा स्तम्बहरु रहेको तथ्यांक रहेपनि कुन कुन सिमा स्तम्ब कहांकहां छन भन्ने बारे स्यमं सिमा सुरक्षाकालागि खटिएका प्रहरीलाई समेत थाहा नभएको अवस्था छ ।
तस्बिरमा मात्र सिमत रहेका त्यस क्षेत्रका सिमा स्तम्बहरु आफनो ठांउमा छन या छैनन त्यसको निगरानी गर्न प्रहरी कहिल्लै नजाने गरेको स्थानियबासीहरु बताउछन । सिमानामा बसेको भारतीय सुरक्षा निकायका पदाधिकारी एक महिनामा चार पांच पटक सीमा स्तम्भको निरीक्षण र अनुगमन गर्न सिमासम्म आइपुग्छन् ।
तर नेपाली पक्षबाट भने अहिलेसम्म अनुगमन गर्न कोही नआएको स्थानीयबासिन्दाको गुनासो छ । सिमा स्तम्भ हराउंदा र भत्कंदा समेत बर्दियाका राजनीतिक दलहरुले पनि गम्भीरताका साथ लिएका छैनन ।
कतिपय सिमास्तम्बहरु भएको ठांउबाटै गायब भएका छन भने कतिपय सिमा स्तम्बहरु, पहिचान हुन पनि गा¥हो छ । सडकको नजिकै रहेको सिमा स्तम्ब पहिचान बिहिन बनिसकेको छ ।
सिमामा रहेका सिमा स्तम्बहरुको कथा बेथा त एका तिर छदैछ । त्यो संगसंगै बर्दियाको जमुनी र कालिकामा भारतिय प्रहरीको ज्यादतिले पनि यहांका स्थानियबासिहरुले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
बेलाबेलामा भारतीय प्रहरी गांउं पस्ने स्थानियबासीलाई कुटपिट गर्ने महिलाहरुलाई हातपात गर्ने लगायतका कृयाकलापले यहांका नागरीकहरु आजित बनेका छन । त्यति मात्र होईन केहि बर्ष पहिले नेपाली भुभागमै आएर भारतिय प्रहरीले लिएर गएका बर्दिया जमुनिका तुल बहादुर शाहिको अबस्था अझै सम्म पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन । भारतिय प्रहरी गांउ पसी स्थानियबासिहरुलाई सताईरहदा पनि स्थानिय प्रसासनले भने केहि गर्न नसकेको बताउंछन स्थानीय बासिन्दा कालु पाण्डे ।
एकातिर भारतिय प्रहरीको ज्यादति अर्को तिर नेपाल प्रहरी बाट पनि शुरक्षाको अनुभुति गर्न नपाउनु यहांका बासिन्दाको बिडम्बना छ । तर केही महिना यता भने जमुनी र कालीकाका बासिन्दालाई गाई चरन र घांसपातकालागि भने सास्ती खेप्न नपरेको स्थानीय बासिन्दा बताउंछन् ।
सिमासुरक्षाको लागि खटिएको ससस्त्र प्रहरीको जमुनि पोष्टमा आवश्यक जनशक्ति पनि छैन । न त श्रोत र साधनको उपलब्धता नै छ । कपास बिकास समितिको गोदाममा बसेको ससस्त्र प्रहरी नेपाल भारतको सिमा भन्दा झण्डै ५ किलोमिटरको दुरीमा छ । तर प्रत्येक ५ किलोमिटरको दुरीमा एक एक क्याम्प रहेको भारतिय सिमा सुरक्षा बलको पोष्ट भने सिमा स्तम्बको नजिकै रहेको छ ।
त्यति मात्र होईन, भारतीय पक्षले दशगजा भित्रै खाल्डो खनेर आफनो सिमा छुट्टाएको छ । अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार दशगजादेखि १० मिटर सम्म कुनै पनि पक्षले सिमा संग सम्बन्धित कुनै कार्य गर्न पाईदैन । तर त्यसको अनुगमन गर्ने निकायनै नहुंदा नेपालको सिमा झनझन सर्दै आईरहेको छ ।
मुख्य मुख्य सिमा स्तम्ब बाहेक सहायक सिमा स्तम्ब एक दुई मात्र देख्न पाईन्छ । यति यो ठाउंमा गएर हेर्ने जोकोही नेपालीलाई यस्तो अवस्था देख्यो भने दुःख नलाग्ला भन्न सकिन्न । त्यति मात्र होइन कुनै स्थानमा सहायक सिमा स्तम्बहरु कहां छन भन्ने कुनै चिन्ह नै छैन । भएका सम्तम्बहरु पनि हराउंदै जिर्ण हुंदै गएका छन् । स्तम्बमा लेखिएका संकेतहरु पनि मेटिदै छन् ।
देशको गौरब बढाउने सिमा स्तम्ब नै दिनप्रति दिन गायब हुंदा र जिर्ण बन्दा त्यस तर्फ कुनै पनि पक्षले अनुसन्धान तथा मर्मतको पहल नगर्नुले कोहि पनि राष्ट्रियता प्रति जिम्मेबार छैनन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र र राष्ट्रियताको नारा लगाउने राजनैतिक दलका नेताहरुले एक पटक बर्दियाको जमुनी र कालिकामा रहेका सिमा स्तम्बमा नजर पुराउन सके अलिकति भएपनि राष्ट्रियताको गौरव बढ्ने थियो की ?
Last Updated on Monday, 17 September 2012 07:50
कुवेर सिंह राना प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा
२८ भदौ, काठमाडौं, नेपाल प्रहरीको सर्बोच्च पद महानिरीक्षकमा कुवेर सिंह राना बढुवा भएका छन् । महानिरीक्ष पदमा तीन एआइजी नबराज ढकाल, भीष्म प्रसाई र कुवेर सिंह राना प्रतिस्पर्धी थिए । बरिष्ठता कार्यसम्पादनमा कुशलता र जनजाति समेत रहेकाले तीनै आधारबाट रानालाई सर्व सहमति कायम गरि मन्त्री परिषद्बाटै प्रहरी महानीरिक्षक पदमा बढुवा गरिएको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादवले बताए । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र गृह मन्त्री विजय कुमार गञ्छादार बीच प्रहरी प्रमुखमा कसलाई बढुवा गर्ने भन्ने विषयमा विगत एक महिना देखि विवाद कायम भए पछि प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा लम्बिन पुगेको थियो । प्रहरी प्रमुख अवकास लिनु अगाडि दुई साता अगाडि देखि विदामा बस्ने परम्परा समेत यो पटक तोडिएको छ । प्रधानमन्त्रीको पटक– पटक आग्रहमा गृहमन्त्री ढिलो मात्र सहमति जनाउँन पुगेका थिए । गृहमन्त्री विजयकुमार गञ्छादारले प्रसाइ वा ढकाललाई र प्रधानमन्त्री भट्टराईले रानालाई बनाउँनु पर्ने अडानका कारण प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति विवादमा तानिएको थियो । प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवाको विषयमा विवाद भए पछि गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच पटक –पटक छलफल समेत भएको थियो । पछि गृहमन्त्री गञ्छार रानाको पक्षमा सहमत भए पछि मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकको बढुवा विगतमा जस्तै यस पटक पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अछुतो रहन सकेन । तर कार्यसम्पादन कुशलता अनि स्वच्छ छवीका रानाको नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तलाई समेत टेकेर गरिएकोमा अलोचनाको स्वर सुनिएको छैन । ५२ बर्षिय कुवेर सिंह राना शुक्रवार गृह सचिव नवीन घिमिरेबाट सपथ लिएर कार्यभार समाल्दै छन् । उनको कार्यकाल १४ महिनाको हुने छ ।
Last Updated on Friday, 14 September 2012 04:36
अपराधी खुलेआम, न त कुनै कारवाहीको पहल, न त कुनै जवाफदेहिता ?
दीपा आले, नेपालगन्ज
केही दिन अगाडि म नेपालगन्जमा भएको एक कार्यक्रममा उपस्थित भएको थिए । कार्यक्रम सुरु भइसकेको थियो । म एकछेउको कुर्चीमा गएर बसे । सहभागीहरु आउने क्रम जारी थियो । म एक कुनामा गएर बसेपछि कार्यक्रम तिर ध्यानकेन्द्रित भयो । मेरा नयनले कार्यक्रममा आएका सहभागीहरुलाई चारैतिर हेर्न थाले प्रायः सहभागीहरु वृदवृद्धा थिए । उनीहरु बेपत्ता परिवारका सदस्य रहेछन् । केही समय मैले उनीहरुको मुहारलाई एकनासले हेरिरहे । लाग्थ्यो उनीहरुको अनुहारमा खुशी होइन दुःख चिन्ताले भरिएको छ । सायद बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुले आफ्ना हराएका परिवारलाई खोजिरहेका छन् ? बुढेउली अवस्थामा पनि आफ्ना बेपत्ता परिवारको खोजीमा राज्यको ढोका घच्घचाई रहेका छन् ? म उनीहरुको अनुहारलाई एकनासले हेरि रहे । कार्यक्रम सुरु हुन थाल्यो । वक्ताहरु बोलिरहेका थिए । मैले सुन्ने र केही कुरा लेख्ने काम गर्दै थिए । त्यतिकैमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गौरी प्रधानले बडो गम्भीर हुंदै दुःखकासाथ भन्नु भयो–सशस्त्र द्वन्द्वकालका दोषीलाई सरकारले पुरस्कृत गरिरहेको छ । मेरो ध्यान आयोगका प्रवक्ता प्रधानको बाणी तिर गयो । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई सरकारले कारवाहीको साटो पुरस्कृत गरेको सुन्दा मलाई दुःख मात्र होइन अचम्म लागेको थियो ।
यसरी सुरु हुन्छ एउटा मानिसको मानवअधिकारको प्रत्याभूति जसलाई राज्यले कसरी लिई रहेको छ भन्ने कुरा । यो त एउटा नमुना मात्र हो यस्ता सयौं घटनाहरु हाम्रो सामु कति छन् कति जसले आजसम्म न्यायको ढोका ढकढकाउदा ढकढकाउदै समयले डांडा काटिसकेको छ तर न्यायको पहल कहिलकतैबाट हुन भने सकेको छैन ।
आदरणीय मेरा पाठकवृन्द समय गतिशिल छ । समयको रफ्तारसंग चल्न नसके मानिसको जीवन मानिस होइन नाम मात्रको मानिसको उपनाममा सिमित हुन्छ । अर्को कुरा जसरी मेरो कलम आफ्नै रफ्तारमा बढी रहेको थियो । २०६९ जेठ ८ गते म माथि सांघातिक आक्रमण भएयता कलम जुन रफ्तारमा बढ्नु पर्ने तर शारीरिक, मानसिक पीडा र समस्याले गर्दा रोकिन पुग्यो । एउटा मानिस भएर जन्मीएपछि उसले पाउने स्वतन्त्रतालाई कुठाराघात गरियो । उसको कलमलाई भांच्ने प्रयास गरियो । त्यति मात्र होइन क्रुर स्वभाव हेर्दा मानिसको खोल ओढेपनि उसको भित्री रुप शैतान थियो । त्यस्ता दानवले मेरो ज्यान लिने दुस्प्रयास गरयो तर भाग्यबश ईश्वरको क्रिपाले म यो धर्तिमा बांच्न सफल भए । आज मैले मेरो ईतिहास मेरो डायरी लेख्ने प्रयास गर्दैछु ।
म माथि घटना घटनु अगाडि मेरो कलमले कस्तो भूमिका खेलिरहेको थियो । र घटना घटिसकेपछिका दिनमा कस्तो भूमिका खेल्न खोज्दैछ यो कुरा मेरा पाठकवृन्दहरुले बुझ्न जरुरी ठान्दछु । मैले मेरा विचारमा बारम्बार भन्ने गर्दै आएको छु –यो संसारका हरेक मानिस फरक फरक क्षमताका “स्टार” हुन् भन्नुको अर्थ तारा हुन । जुन ताराले आफ्नो क्षमता अनुसार समाजलाई केही न केही परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ जसको प्रकाशले कसैको जीवनलाई बर्वाद हुनबाट बचाउंछ । तर अर्को कुरा पनि मैले बारम्बार भन्ने गर्दै आएको छु मानिस आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न अरुको ज्यान लिन पछि पर्दैन । त्यो त प्रत्येक मानिसको मगजमा भर पर्ने कुरा हो आफू सतमार्ग तिर गइरहेको छु या नरगीय मार्गतिर ।
विश्वका ठूला ठूला विद्ववानहरु भन्ने गर्दछन्– तिमी यदि यो समाजलाई परिवर्तन गर्न छ भने तिमी आफैबाट सुरुवात गर । तिमीले गरेको हरेक क्रियाकलापको बारेमा डायरी लेख । जसले भोलि गएर त्यही डायरी यो समाज, देश र विश्वकोलागि एउटा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजको रुपमा परिणत हुनेछ । आदणीय मेरा पाठकवृन्द हामीलाई थाहा छ । हिजोका दिनमा लेखिएका ऐतिहासिक दस्ताबेज आज हामीले पढीरहेका छौं । हिजोको दिनमा त्यो दस्ताबेज सामान्य लाग्थ्यो तर आज त्यो ऐतिहासिक दस्ताबेज हाम्रो लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
तर सबै डायरी सत्य हुन्छन् भन्ने छैन त्यो डायरी लेख्ने मानिसमा भर पर्दछ । डायरीको पनि क्वालीटी हुन्छ । विद्ववान महात्मागान्धीले आफ्नो आत्माकथामा लेखेका छन् । जुन आत्माकथा नामक किताबमा यौनचाहनाको रसले गर्दा उनले आफ्ना विरामी बाबुलाई छोडेर गएका थिए । जसको फलस्वरुप उनको बाबुको अन्तिम सास जाने बेला उनको अन्तिम ईच्छा पुरा गर्न सकेनन् । गान्धीले यसरी आफ्नो डायरीमा आफ्नो बाबुको अन्तीम ईच्छा पुरा गर्न नसक्दा उनी जीवन भर पछुताउनु परेको थियो । त्यसले गर्दा उनको डायरीमा सत्यता छ यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । उनले आफ्नो जीवनको सत्य यर्थात कुरा समाजको अगाडि ल्याउन सफल भए । आज हजारौ मानिसहरु गान्धीको डायरी अध्ययन गर्ने गर्दछन् ।
आदरणीय मेरा पाठकवृन्द आज मैले धेरै भूमिकाहरु बांध्नु परेको छ । धेरै भन्दा धेरै लेख्नु छ । यहांहरुले पनि धेरै भन्दा धेरै पढ्नु छ । किन किन मरेर बांचेको छु यो धर्तिमा । पुराना र नयां ईतिहासका विचारलाई पुनरलेखन गर्नु छ । मैले धेरै पटक मेरो लेखमा लेखेको छु । जबसम्म मेरो शरीरमा सास रहन्छ । जतिबेला सम्म मेरो मगजले काम गर्छ । तब सम्म मेरो कलम निरन्तर चलिरहेछ । मेरो कलमको मशी सुक्ने छैन । जति बेला मेरो सास रोकिन्छ । तेति बेला मात्र मेरो कलमको मशी रोकिने छ । तर म मरे पनि मैले लेखेका विचार, यो समाज र राष्ट्रलाई गरेको योगदान पाठकवृन्दहरु मांझ सधैं रहिरहनेछ । त्यसैले मैले पाएको नयां जीवनको उपहार स्वरुप मेरो डायरी मार्फत हाम्रो समाजको निगरानी गरिरहने छु । आज मैले लेखेको सानो कुरा कसैकोलागि हांसोको पात्र होला । तर भोलि गएर यो ऐतिहासिक दस्ताबेज नहोला भन्न सकिन्न । हुन त मेरा केही कलमकार सहकर्मीहरुले भन्ने गर्दारहेछन्–दीपाको सोच नकारात्मक छ भनेर । कतिले मेरो मुखमा पनि भनेका छन् तर जसले जे भने पनि त्यसको जवाफ काम र समयले देखाउंछ । त्यो पृष्टी पनि भई सकेको छ । सत्य सधैं सांचो हुन्छ । अन्तिममा सत्यको नै जीत हुन्छ । सत्यमा नै संसार टिकेको छ । हल्ला गर्नेहरुले जति नै फुरफुर किन नगरोस् तर फुरफुर गर्ने गन्ध दिर्घकालीन हुंदैन । यो हामी सबैले महसुस गरेका छौं ।
आज मैले भन्नै पर्दछ राज्य सत्तामा बसेर जनताको खुन पसिना खाने र भोगविलासमा मस्ती गर्ने सत्ताधारीलाई । तिमीहरुले कान खोलेर सुन । जनताको कामकोलागि सरकारमा गएका हौ भने जनताको सेवा गर । जनताको समस्या समाधान गर । जनतालाई न्याय देउ । तर सत्तामा बस्ने सत्ताधारी नेताहरु न त तिमीले जनताको आंशु पुछ्न सक्यौ ? न त जनतालाई न्याय दिन सक्यौ ? नत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हराएका बेपत्ता परिवारलाई राहत दिन सक्यौ ? न त हराएका परिवारलाई खोजविन र अनुसन्धान गर्न सक्यौ ? लाग्छ सत्तामा बस्ने सत्तादारी तिमीहरु आफै बोक्सी आफै धामी बन्ने काम गर्दैछौ । यता मानवअधिकारको रक्षामा लागेका मानवअधिकारवादीहरुको बोल्दा बोल्दै घांटी सुक्यो । हिड्दाहिड्दै खुटा फुटिसक्यो । तर मानव अधिकारको रक्षाकोलागि लाइसेन्स प्राप्त आयोग को कुरा समेत नसुन्ने निकम्बा राज्यले किन सुनुवाई गरेको छैन यहां निर प्रश्न उठ्ने गर्दछ । बोक्सीले धामीलाई बारम्बार गिजाई रहेझै लाइसेन्स प्राप्त आयोगको कुरालाई नसुन्दा अचम्म छ सत्ताधारीको चलखेल । जसले सत्य बोल्छ । जसले सत्य कुरा ल्याउंछ । जसले सत्यकोलागि न्यायको ढोका ढकढकाउंछ उसैको पिठ पछाडि लात हान्ने काम भोगविलासमा लिप्त सत्ताधारीले गरिरहेका छन् । के यही हो त एउटा जनताले पाउने न्याय ? एउटा लाइसेन्स प्राप्त निकायको आवाजलाई सत्ताधारीले बेवास्ता गर्दछ भने ति निमुखा जनता जसलाई आफ्नो अधिकार भनेको के हो त्यो पनि थाहा छैन । आफूले पाउने अधिकार कहां गएर पाउने हो त्यो थाहा छैन भने त्यस्ता जनताको सुनुवाई कहिले होला ?
आदरणीय मेरा पाठकवृन्द मगजमा यस्ता कुराहरु धेरै छन् तर म संयम सांघातिक हमलाको पीडित हुं । समाजमा म पत्रकार भनेर पहिचान बनाएपनि म एउटा आन्दोलनकारीले सांघातिक हमला गरेर पीडितको बिल्ला भेर्नु परेको छ । आज न्यायको खोजिमा मेरो पाइला बढी रहेको छ । आगामि दिनमा पनि न्यायकोलागि बढ्नेछ । मेरो ज्यान लिने क्रुर दानवको अन्त्य एक दिन निश्चित छ । “शैतानले सताउंछ तर ज्यान लिन सक्दैन” भन्ने कुरा सत्यसावीत भएको छ । हो एकदिन मानिसलाई जन्मेपछि मर्नु छ । तर आफ्नो दाना पुरा नहुंदा सम्म कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि ममाथि भएको घटनाले सावीत गरिदिएको छ । म एउटा पत्रकार समाजलाई परिवर्तन गर्न हिडेको यात्री हुं । म जस्तो समाजलाई सुसुचित गर्ने पत्रकारले त आफू माथि भएको सांघातिक हमलाको दोषीलाई कारवाही गर्न राज्यले सकिरहेको छैन । सत्ताधारीहरु चाहदैनन् आफ्ना आसेपासेहरुलाई खोरमा राख्न किन किन आफै धामी आफै बोक्सी बनेका छन् । हिजोको दिनमा जब म माथि ज्यान लिने हमला भयो । त्यति बेला सत्ता र कानुनको खोल ओढेका सत्ताधारीहरुले अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कढघरामा उभ्याउछु भनेको प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर आज सत्तालिप्तको मोहमा ओतप्रोत भएर होला त्यसको कुनै सुनुवाई छैन न त क्षतिपूर्तिको कुनै पहल छ ।
आदरणीय पाठकवृन्द म मेरो न्यायकोलागि मेरो पाईला अगाडि बढाउदैछु । न्यायको खोजीमा स्थानीय निकाय देखि केन्द्रिय निकाय जसलाई सिंहदरवार भनेर चिन्ने गर्दछन् त्यहां सम्म पुगेर आए । तर सत्तामा बस्ने सत्ताधारीहरुलाई कुनै चांसो छैन । न्यायको खोजीमा आएका जनतालाई भिग माग्न आएको जस्तो उनीहरुको स्वभाव थियो । के यही हो त जनताले चुनेर पठाएका सत्ताधारी नेताहरुमा हुनु पर्ने स्वभाव ? बढो अचम्म लाग्छ । दुःख पनि लाग्छ । अझ अर्को कुरा जसको पहुंच हुंदैन । उसले सिंहदरवारमा बसेका सत्ताधारीहरुलाई भेट्न त के उसको अनुहार समेत हेर्न पाउदैनन् । यस्तो छ हाम्रो देशको बागडोर सम्माल्ने सत्ताधारीहरु जो हुनु र नहुनुमा केही फरक छैन । आज मैले मुख फोडेर भन्नुपर्दछ देश र जनताको सेवा गर्न गएका जनताका सेवकहरु हो कानमा तेल हालेर नबस । हिजोको ईतिहासलाई नभुल । सिंहदरवार भित्र रहेको सत्तामा बस्न पायो भन्दैमा जनताको न्यायकोलागि लडाई लड्न नभुल । यदि सक्दैनौ भने सत्ता छोडेर विकासका बाटा खोजिरहेका नेपालकै कैयौ बांझा खेतहरु छन् आएर जोत अनि कृषि क्षेत्रलाई टेवा पुरायौ यदि त्यो पनि गर्न सकिदैन भने नेता त के मानिस हुनुको कुनै औचित्य छैन । मुखमा राम राम बगलीमा छुरा हान्ने काम नगर । एक दिन तिम्रो जित होला तर सधै भरी हुने छैन । जनताको रगत त्यसै बगेको छैन । जनताको आंशु त्यसै खसेको छैन । जनताको मन त्यतिकै अमिलो भएको छैन । भाषणमा कौवा र डाक्ग्रै जस्तै कराएर हावाको भरमा प्रतिवद्धता जाहेर गरेर केही हुनेवाला छैन । त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सिक । जनताको सयौं पिडा भएतापनि एउटा पीडाको न्याय दिन सक्यौ भने तिमी यो देशकोलागि केही गर्न सक्ने नेताको रुपमा जनताले चिन्नेछ होइन भने तिमी नेता होइन कुनेता हुनेछौ ।
आदरणीय मेरा पाठक विन्दृ मेरो विचारको अन्तिम मोडमा मैले भन्नै पर्दछ जब म माथि ज्यान दिने आक्रमण भयो त्यो घटनाको सुनुवाई अहिले आधाबाटोमा अड्किएको छ । कानुनको खोल ओढेका सत्ताधारीहरु न्याय दिन्छौ पनि भन्छन् र भित्रभित्र दिनु हुन्न पनि भनेका गन्ध फैलिएको छ । तर जुन बेला ममाथि घटना घट्यो त्यो बेला समाजले मेरो अस्तित्व माथि औंला उठाईरहेको थियो । जति बेला म शारीरिक र मानसिक रुपमा सक्त घाईते थिए त्यो बेला मैले काम गर्ने मिडियाहावस “सगरमाथा टेलिभिजन”ले मेरो कलमलाई बांचिनबाट जोगायो । त्यो गुन मैले मेरो जीवनमा कहिल्यै भुल्ने छैन । हामी जस्ता पत्रकार जो जनताको सेवामा २४ सै घण्टा तलिन हुन्छौ त्यसको मुल्यांकन एउटा राज्यले गर्नु पर्ने हो तर सत्ताधारीहरु जनताको जति सुकै रगतको भेल किन नबगोस् तर उनीहरुलाई कुनै मतलब छैन । तर एउटा मिडियाहावस जो आफ्नै बलबुताले चलेको छ । उसले आर्थिक रुपमै सम्मान गर्नु र समाजको अगाडि सम्मान दिनु त्यो सत्ताधारीहरुकोलागि झापड बनेको छ । तर गहिरो निन्द्रामा परेको मानिसलाई बुउ्झाउन सकिन्छ गरे तर नक्कल पारेर सुतेको मानिसलाई बिउझाउन सकिन्न भन्ने उखान जस्तै भएको छ सत्ताधारीको शासन ।
आदरणीय मेरा पाठकवृन्द आवाज विहिनहरुको आवाजलाई न्यायको ढोकासम्म पुराउने प्रयास जारी छ । मेरो मात्र होइन सयौं त्यस्ता आवाज विहिनहरु छन् हाम्रो समाजमा उनीहरुको न्यायकोलागि लड्नु छ । त्यसकारण निमुखा जनता र सत्यको लडाई लड्नकोलागि तपाईहरु सबैको साथको आवश्यकता छ । फेरी पनि भन्ने गर्छु मेरो घटना प्रति चिन्ता व्यक्त गर्ने र न्यायको पहल गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरु विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरु जसले मेरो सत्य घटना लेखेर जनताको सामु पुराउने त्यस्ता पत्रकार साथीहरु, प्रहरी प्रशासनमा पनि विशेष गरी मेरो मुद्धालाई कानुनी दायरामा पुराउन सफल बांकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीराज पोख्रेल, एस्पी विक्रम सिंह थापा जसलाई म जनतालाई न्याय दिने सेवक भनेर उपनाम दिन चाहन्छु । त्यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका मुरारी खरेल जसले मेरो न्यायको पहलकदमी गर्नु भयो । महिलाबादी, समाजसेवी, इन्सेक, ब्यापार व्यवसायी, महिला विकास, माईती नेपाललगायत देश विदेशमा भएका मेरा शुभचिन्तकहरु जसले मेरो शिर्घस्वास्थ्यको कामना गर्नु भयो उहांहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । विशेष धन्यवादको पात्रहरु जसले मेरो घाइते शरीरलाई उपचार गरेर आज यो समाजमा हेर्न लायक बनाउनु भयो डा. विनोद कर्ण,डा. किदवाई म मेरो जीवनमा सधै याद गर्नेछु । अहिले पनि ममाथि हमला गर्ने अपराधीहरु खुलेआम मेरो आम्नेसाम्मे हिडीहरेका छन् । त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सबैलाई पहल गर्दछु । मेरो कलमलाई भाच्ने दुस्साह गर्ने क्रुर दानवहरु हो होस् गर तिमीहरुको आयू छोटो छ । तिमीहरुले मेरो ज्यान लिनकोलागि म माथि हमला गरेका थियौ तर “इस्पात”ले बनेको मेरो शरीरमा केही भएन । त्यसकारण आदरणीय पाठकवृन्दहरु मेरो लडाईमा यहांहरुले साथ दिनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ अर्को लेखमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई विदा हुन्छु ।
Last Updated on Thursday, 13 September 2012 01:18
आदिवासीले आफ्नो शत्रु खोज्नु भन्दा वास्तविक कुरो बुझ्नु राम्रो हो
एम बि थापा दर्लामी मगर, ६ सेप्टेम्वर २०१२ गतेका दिन फेशवुक मार्फत पाएको लेख आफ्नो शत्रुको खोजि आफै भित्र गर्दा आदिवासी समुदायको भलो हुनेछ । शिर्षकको हरिशंकर पराजुलीको (बिराटनगर) समाचारको निम्न अंशहरु प्रति म एम बि थापा दर्लामी मगरको ध्यान आकर्षण भएको छ !
आइ जी पी लाइ गृह मंत्रालयको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषदले नियुक्ती गर्ने हो, मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भनेको प्रधानमन्त्री हुन् । प्रधानमन्त्रिले साच्चिकै कुवेरसिंह राना मगरलार्इ नियुक्ति गर्न चाहन्छन अथवा चाहन्थे भने राना अवश्य नियुक्ति हुन सक्थे । तर प्रधानमन्त्री मैले कुटे जस्तो गर्छु त रोए जस्तो गर भन्ने वाहना रहेकाले राना आइ जि पि मा नियुक्ति हुन नसकेको पनि हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री भट्टराई आदिवासी जनजातिका हिमायती हुन भन्नु त्यति मिल्ने कुरो होइन । यसलाई गृह मन्त्रि गच्छदार त देखाउने दात मात्र हुन् चपाउने दात त वाहुनवादै हो ।
“वाहुन जन्म जातै उच्च जाति हो, आदिवासी माथि शासन गंर्ने उसको नै सर्गिक अधिकार हो”
यस कुरामा हामी आदिवासी जनजाती सहमत छैनौ । कुनै वेला त्यस्तो समय (वैदिककाल) थियो होला । तर यो लोकतान्त्रीक समयमा यो सम्भव छैन । जस्तै (भीमसेन थापालाइ सम्झे हुन्छ) मान्छे जन्म जातले ठुलो हुने होइन । मान्छे त कर्म र दिलले ठुलो हुने हो । महांकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा (वाहुन) ले मान्छे जातले होइन दिलले ठुलो हुन्छ भन्नु भएको छ यो कथनलाई एकपटक स्मरण गर्नु भए राम्रो हुने थियोकी !
“पूर्वका राइ लिम्बुले वि पी कोइरालाको वंशलाई स्थापित गरे, पश्चिमका मुर्ख मगरहरुले वाहुन प्रचण्ड र वावुरामलाई हिरो बनाए । अव निर्णय गरौ आदिवासी की वाहुन दोषी”
दोषी त वाहुनहरु नै हुन् किनभने वाहुनहरुले आदिवासीहरुलार्इ मलाइ नेता बनाउनु होस म तपाइहरुलाई जातिय मुक्ति दिन्छु भनेर आदिवासी जनजातीहरु वाहुनको झुट्टो वोलीमा भर परे । वेइमान र विस्वाश्घात गर्ने दोषी हुन्छ कि वेइमान र विस्वाश्घातमा पर्ने दोषी हुन्छ…? लेखकले आफै छुट्ट्याए पनि हुन्छ । हाम्रो दोष त यत्ति मात्र हो हामीले आफै हिरो बन्नुको सत्टो अर्कालाई हिरो बनायों । यसबाट हामीले राम्रों शिक्षा पार्योंकी अर्कालाई हिरो बनाउने होइन रहेछ । वरु आफै हिरो बन्नु पर्ने रहेछ ।
“पश्चिमका मुर्ख मगरहरुले वाहुन प्रचण्ड र वावुरामलार्इ हिरो बनाए”
मगरहरु मुर्ख होइनन, वरु इमान्दार हुन् । वाठो भनाउदाहरु इमानदारितालाई मुर्खातासंग तुलना गर्छन । लेखकज्यु पनि यही रनभुलमापर्नुभएजस्तोछ । नेपाल वनाउन मगरले गरेको योगदान मगरको मुर्खता हो…? प्रचण्ड र वावुरामलाई हिरो वनाएर नेपालमा सङ्घीय लोक्तात्रिक गणतन्त्र ल्याउन मगरले गरेको वलिदान पनि मुर्खता हो…? आखा फुटेको गोरुले सबै सधै हरियो मात्र देख्छरे ।
“सय वर्षसम्म यस देश वाट वाहुनलाई हल्लाउन सक्ने क्षमता कसैमा पनि छैन”
एक ताका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन समशेरले बि पी लार्इ पनि यस्तै - येस्तै कुरा भनेका थिए I राजकाज गर्न निधारमा लेखेर आएको हुनुपर्छ । यो भनाइ भनेको पुग नपुग ३ । ४ वर्षमा बि पी उहासंग गृहमन्त्री भए र त्येसको करिव ७ । ८ वर्ष पश्चात देशका प्रधानमन्त्री पनि भए । मोहन शमसेरको त्यस्तो हुकार खोलै - खोला गयो । कतै त्येस्तै त नहोला । अर्को कुरा पनि भन्न मन लग्यो अहिले वाहुन दुइ खुट्टे होइन, एक खुट्टे भइसकेको छ । अर्को खुट्टा त मधेसी जनता हो । लंगडा मान्छेको फुर्ति पनि गजवकै छ बा ! त्येसैले सय वर्षको परिकल्पना त पर जावस आज हो कि भोलि जस्तो छ ।
“अव वाहुनको गन्तब्य नेपाल होइन अमेरिका र युरोप हो”
वाहुनको थुप्रै कमी कमजोरी र दोषहरु मध्ये देशप्रति साच्चिकै प्रेम नहुनु पनि हो । एक उनीहरु यो माटोमा जताबाट भागेर आएका थिए अव भागेर उतै जान खोज्दैछन् । येही वसेर सवै जात जातिका नेपाली जनतासंग समानताको आधारमा नागरिक सम्वन्ध बनाएर येही माटोलाई फलाउने फुलाउने चिन्तन छैन । “जोगीको चाल जोगि कै भए जस्तो परदेशी रात काटेपछी हिडे जस्तो” । वाहुनको मतलवी र स्वार्थी मनोवृत्ति नेपाल र नेपालीको लागि सुगौली सन्धि देखि अभिशाप वन्दै आएको छ । अव अझै के के हुने हो । धर्मपुत्रू जस्तो होइन, छोरा भएर वोल्नुहोस । चुच्चेढुङ्गो उहीटुंगो भने झैँ वाहिरबाट आएका वाहुन्हरु फेरी वाहिरै जान चाहन्छन । नत्र वाहुनको गन्तब्य अमेरिका र युरोप नभई नेपाल नै हुने थियो होला ।
हरिशंकर पराजुली (बिराटनगर) ज्युको लेख हेर्नलाई यसमा क्लिक गर्नु होस
(दर्लामी मगर आदिवासी जनजाति महासंघ हंगकंगका अध्यक्ष हुन)
Last Updated on Tuesday, 25 September 2012 07:52